Zimbabweans vote in first presidential election since 2008 4 years ago ago
Zimbabwe's Mugabe says he will step down if defeated in election 4 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, July 30 (UPI) -- Zimbabwean President Robert Mugabe said he will quit after 33 years in power if he loses this week's national election.
Tsvangirai: Zimbabwe election outcome will be 'rigged' 4 years ago ago
Complaints aired over Zimbabwe's early voting for police, others 4 years ago ago
Zimbabwe court upholds date of elections 4 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, July 5 (UPI) -- Zimbabwe's Constitutional Court unanimously rejected five appeals to delay elections that are set for July 31, court officials said Friday.
Zimbabwe's election is July 31, Mugabe announces 4 years ago ago
African activist granted bail after arrest 4 years ago ago
Zimbabwe overwhelmingly OKs new charter 4 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, March 19 (UPI) -- Nearly 95 percent of voters in Zimbabwe have approved the country's new constitution that limits the president's power, election officials say.
Tsvangirai's officials arrested 4 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, March 17 (UPI) -- Police did not give a reason for arresting a senior official in Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai's offices and his lawyer Sunday.
Robert Mugabe has been portrayed as a demon, but he himself made a contribution to that character, and I cannot defend what he did over the last 10 years in terms of violence
It has brought home the reality that as a movement we have an unreliable and unrepentant partner in the transitional government
This is a constitutional crisis. ZANU-PF (Mugabe's party) cannot run government alone constitutionally and legally
Mugabe may be part of the problem but he is also part of the solution
The fact of the matter is that Zimbabwe is in a crisis